Wafdi ka socda QM iyo Dowladda Soomaaliya oo gaaray Jowhar | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Wafdi ka socda QM iyo Dowladda Soomaaliya oo gaaray Jowhar
Wafdi ka socda QM iyo Dowladda Soomaaliya oo gaaray Jowhar
Taliyaha Hay’adda nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya , taliyaha ciidamada booliska iyo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka dadban ayaa maanta tagay magaalada Jowhar ee xarunta gobalka Sh/dhexe.
Generaal Cabdulaahi Gaafow taliyaha Nabad sugida iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa waxaa magaalada kusoo dhaweeyay mas’uuliyiinta maamulka Hirshabeele iyo saraakiisha ciidamada ee kusugan magaalada Jowhar.
Ujeedada wafdigan ay u tageen magaalada Jowhar ayaa la sheegay inay tahay sidii xal looga gaari lahaa shaqaaqadii habeenkii Jimcihii la soo dhaafay ka dhacday hoolka shirarka ee magaalada Jowhar, taasi oo cabsi badan ku abuurtay shacabka magaalada iyo ergadii doorashada ka qeyb galaysay.
Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka dadban Cumar Dhageey ayaa kulamo la leh madaxda doorashooyinka ee heer maamul iyo xubnaha musharixiinta ah ee shaqaaqada ka bilaabatay.
Guddiga Doorashooyinka ayaa horay u hakiyay doorashada Aqalka Hoose ee ka soconaysay Magaalada Jowhar.
Dhanka kale Magaalada Jowhar waxaa gaaray wafdi ka socda QM oo uu hogaaminayo wakiilka gaar ka ah Xoghayaha guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya Danjire Macheal Keating.
Wafdiga QM ayaa arrimaha ay Jowhar u tageen sida la sheegay sidii loo dar-dar galin lahaa howlaha doorashada Aqalka Hoose.
Mr. Keating ayaa shalay gaaray M.Baydhabo ee xarunta gobalka Baay, isagoo Goobjoog ka ahaa doorashadii Aqalka Hoose ee shalay ka dhacday Baydhabo.
Previous articleKu dhowaad 100 qof oo ku dhintay shil ka dhacay wadanka Hindiya
Next articleMadaxwaynaha Turkiga oo sheegay in Wadankiisu uusan u baahnayn ku biiridda M Yurub